Babambe ingqungquthela abakhubazekile | News24
Babambe ingqungquthela abakhubazekile
KUSAFANELE kufundiswe umphakathi kabanzi ngokuphila komuntu okhubazekile.
Lokhu kushiwo abakhubazekile engqungqutheleni yezinsuku ezimbili ebibanjwe e-Anerley Youth Camp kusukela mhla zi-14 kuya zi-16 kuyona lenyanga.
Abakhubazekile abasuka komasipala basOgwini bahlanganyele kulendawo ukuzodingida izinto ezithinta amalungelo abakhubazekile emiphakathini abaphila kuyona.
Usihlalo wenhlangano yabakhubazekile uPhillip Gamede uthe lengqungquthela ibe yimpumelelo enkulu njengoba abaningi abahambele lomhlangano bathole ulwazi ngezinhlelo nezinhlaka eziningi esizana nabakhubazekile.
“Lomhlangano ubanjwe ngaphansi kwesiqubulo esithi ‘Empowerment of disabled people for greater impact’. Ngamafuphi lokhu kusho ukuthi, ukukuthazwa kwabakubazekile okwenza umehluko,” kusho uGamede.
Abakhubazekile banikwe ithuba lokuthi baveze imibono yokuthi bangenza kanjani ukuthi nabo bazizwe bemukelekile emiphakathini nanokuthi bazizwe bengabantu nabo njengawonke umuntu ophila kulelizwe.
Ziningi izindlela abazivezile ezifana nokuthi kufundiswe kabanzi ngezinhlobo zokukhubazeka emiphakathini, ukubamba iqhaza ezinhleweni zikahulumeni, kwezemfundo, ezomnotho, ezempilo kanye nezepolitiki.
Laba aba-60 abebehambele lomhlangano abesifazane nabesilisa bahlukanisiwe baba ngamaqembu amabili ukuze iqembu neqembu liveze izinkinga elibhekene nazo nanokuthi lezozinkinga zingalungiswa kanjani.
Okhulumele abesifazane uZethu Cele uthe njengoba kuzoqala inyanga yabesifazane uNcwaba (August) bazothanda ukuthi babe nezinhlelo zabesifazane abakhubazekile komasipala babo.
“Singathanda ukuthi njengoba kuzoqala lenyanga yabesifazane ukuthi nathi omasipala basihlelele izinto ezizoqondana nathi njengabesifazane abaphila nokukhabazeka okwehluka hlukene,” kusho uCele.
Emva kokuthi athule inkulumo yakhe uCele, uGamede Ube esegqugquzela laba besifazane ukuthi kube yibona abaholi baqhamuke nezinhlelo zabo bese becela omasipala ukuthi babaxhase.
Abesilisa bona bebejule kakhulu. USithule Nyawo noSifiso Majiya bathule inkulumo yabesilisa bathi bona njengabesilisa abakhubazekile bazogqugquzela omasipala ukuthi babanike nje noma usuku olulodwa enyangeni yabesilisa ukuthi nabo bazibonakalise emiphakathini.
abesiliza baveze ezinkinga nezingqinaba ababhekana nazo emiphakathi nasemindenini yabo.
Ekuphetheni kwomhlangano abaningi abebewuhambele bakhombise ukuthokoza okukhulu ngawo njengoba befunde okuningi kanti futhi bathola ulwazi ngamalungelo abo njengabantu abakhubazekile.
Lengqungquthela ikhethe ikomidi elizomela abakhubazekile Ogwini lulonke. Abakhethiwe kube nguBonginkosi Cwele usihlalo, Nobesuthu Ndwalane usekela sihlalo, Nosipho Shabane unobhala, Zethu Cele umgcinimafa kanye noThandokuhle Mbesa ozomela izinhlelo zentsha